यी हुन् रिभर्स गियरमा कार चलाउने एक मात्र ड्राइभर
हरप्रित देव भारतको पञ्जावस्थित बठिन्डाका वासिन्दा हुन् र उनी राज्य सरकारबाट रिभर्स गियरमा गाडी चलाउन अनुमति पाएका एक मात्र ब्यक्ति पनि हुन् । फर्मुला वान च्याम्पियन माइकल सुमाकरले पनि आफ्नो छोरा माइक समाकरलाई तालिम दिनका लागि हरप्रितसँग सम्पर्क गरेक...
गत फिफा विश्वकपको समयमा क्वाटरफाइनल खेलमा इंग्ल्यान्ड टिमले स्विडेनलाई हराए पछि इंग्ल्यान्डका गल्लीमा प्रशंसकहरुले निकै नै खुसीयाली मनाएका थिए । उक्त अवसरमा एक युवा विद्यार्थीका साथै अन्य तीन व्यक्तिहरुले प्रहरीको गाडी तोडफोड गर्नुका साथै त्यसको छतम...
यो हो जर्मनीमा चल्ने विश्वकै पहिलो अटोनोमस ट्राम, यस्ता छन् विशेषता
सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न जर्मनीले विश्वकै पहिलो अटोनोमस ट्राम सेवा प्रारम्भ गरेको छ । सो ट्राम स्वचालित रुपमा चल्छ । यसमा मल्टीपल राडर लिडार (लाइट डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ) र क्यामेरा सेन्सर जडान गरिएको हुन्छ । यसले डिजिटल आँखाको जस्तै काम गर्ने बता...
होन्डाले बिक्री ग¥यो २ करोड ५० लाख युनिट स्कुटर, एक रेकर्ड कायम
टु ह्विलर निर्माता कम्पनी होन्डाले भारतमा २ करोड ५० लाख युनिट स्कुटर बिक्री गरेर रेकर्ड कायम गरेको छ । कुनै पनि स्कुटर कम्पनीले बिक्री गरेको यो सबैभन्दा बढी संख्या हो । कम्पनीले यो उपलब्धि १७ वर्षमा प्राप्त गरेको हो । कम्पनीले १३ वर्षको अवधिमा १ करो...
चीनको चोङकिङ सपिङ मलको छतमा विभिन्न खेलहरु खेल्न सकिने कोर्ट निर्माण गरिएको छ । १७ हजार बर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा बनेको उक्त सपिङ मलमा ४ वटा टेबुल टेनिस कोर्ट, ३ वटा ब्याडमिन्टन कोर्ट, एउटा बास्केटबल कोर्ट र एउटा वृत्ताकार रनिङ ट्रयाक बनाइएको छ । मलम...
एउटा बाइकमा कतिजना वस्न सक्छन् ? दुइ, तीन या धेरैमा पाच । यद्यपि एकसाथ १० जना वस्न सक्ने बाइक पनि प्रचलनमा छ । वस्न मात्र होइन, यसमा १० जना आरामले वसेर कुदाउन सकिन्छ । दुइ एवं एक सिटयुक्त बाइक देखिरहेका हामीलाई उक्त १० सिट क्षमताको बाइक नौलो लाग्न सक...
एकैपटक नाचे १८० निसान गाडी, बन्यो वर्ल्ड रेकर्ड (भिडियो सहित)
दुबईमा १ सय ८० निसान पेट्रोल एसयूभी एकैपटक क्रमबद्ध डान्स गरेर गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएको छ । धेरै कारहरु एकैपटक एक लयमा चलाएर सो रेकर्ड कायम भएको हो । मरुभूमिमा हुने ठूलो बाज आकारको ट्रयाकमा निसान पेट्रोल गाडी डान्स गरे जसरी चलाइएको थि...
दीपावलीको उपहार, ६ सय कार
नेपालमा तिहार वा दीपावली र भारतमा दिवाली भनिने चाडपर्व आफैमा ठूलो हो । तिहारको अवसरमा हामीले पनि विभिन्न उपहार दिने गर्छौ । तर भारतको गुजरातस्थित हिरा व्यापारी सावजी ढोलकियाले भने यस पटकको तिहार अर्थात दिवालीको अवसरमा आफ्ना कर्मचारीलाई एक एक कार प्र...
स्टोट हल फार्म : सडकसँगै सुन्दर बस्ती
बेलायतको एम ६२ मोटरवे अन्तर्गत ल्यांकसायर र योर्कसायर बीचको जक्सन २२ र २३ मा यात्रा गर्दा यात्रीहरुले बीचको एक स्थानमा अनौठो सौन्दर्यत्माक दृश्य देख्न पाउछन् । सो मोटरवेको बीचमा एउटा ठूलो बस्ती र खेतवारी देख्न सकिन्छ । यसलाई स्टोट हल फार्म भनिन्छ ।...
शानदार लक्जरी कारको रुपमा परिचित मिनी कुपरको स्पेसल अक्सफोर्ड एडिसन कम्पनीले लन्च गरेको छ । यद्यपि सो कार खरिद गर्ने मौका २५ जनाले मात्र पाउने छन् । मिनी कुपरको सो लक्जरी कार भारतमा २५ युनिट मात्र बिक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछ । सो स्पेसल एडिसन ह्याचब्...
खुसीयालीमा श्रीमतीलाई अंगालो, गेरेन्ट थोमस बने साइकल रेस विजेता
जब गेरेन्ट थोमसले ८३ घण्टा १७ मिनेट १३ सेकेन्डमा साइकल रेस टुर डी फ्रान्स जिते, खुसीयालीमा श्रीमती साराह एलेनलाई अंगालोमा भरे । उनले भनेका थिए, ‘यो भन्दा पहिले म अन्तिम पटक मेरो विवाहको खुसीमा रोएको थिए । आज फेरि रोएको छु । म यी दुई दिन जिन्दगी...
चीनद्वारा समुद्रमा सबैभन्दा लामो पुल निर्माण
चीनले समुद्रमा संसारकै सबैभन्दा लामो पुल निर्माण गरेको छ । चीन हालै निर्माण भएको ५५ किलोमिटर लामो पुल उद्घाटनको तयारीमा लागेको छ । हङकङ–झुहाई एन्ड मकाउ पुल बुधबार आम जनताका लागि खुला गरिनेछ । यो नदी या समुद्रमा निर्माण भएको संसारको छैठौं लामो...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कारलाई चलनचल्तिमा ‘द बिस्ट’ भनिन्छ । सो क्याडिलाक बिस्ट लिमोे कार केही समय पहिले सार्वजनिक भएको थियो । सो कार अनेक प्रकारले रहस्यमय रहेको जानकारी मिडियाहरुले दिएका छन् । यही रहस्यका कारण राष्ट्रपति ट्र...
यो हो अमेरिकाको हाइवे टनेल
निजी घर वा ग्यारेज जस्तै देखिए पनि यो उत्तर अमेरिकाको सर्वाधिक लामो ‘हाइवे टनेल’ हो । अमेरिकाको अलास्का राज्यको पोर्टेज ग्लेसियर नजिक रहेको यसलाई ‘एन्टोन एन्डरसन मेमोरियल टनेल’ हो । सामान्य रुपमा यसलाई ‘ह्विटियर टनेल&rs...
आयो १२ सय किलोमिटर प्रतिघन्टा चल्ने हाइपरलुप
काठमाडौँ — स्पेनस्थित हाइपरलुप ट्रान्सपोर्टेशन टेक्नोलजी (एचटीटी) ले गत मंगलबार पहिलो पटक आफ्नो पूर्ण आकारको यात्रुबाहक क्याप्सुल (रेल) सार्वजनिक गरेको छ । यसले यात्रुहरुलाई अतितिब्र गतिमा एउटा चुम्बकीय नलीमा गुड्ने क्याप्सुलमार्फत यात्रा...
आश्चर्य, बर्थडे गिफ्टको रुपमा छोराले बुवालाई दिए हुन्डाई भर्ना कार
छोराले बुवालाई बर्थडे गिफ्टको रुपमा कुनै सपनामै नचिताएको वस्तु दियो भने कति खुसी मिल्छ होला ? यो खुसी हेर्नका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको भिडियो हेरे पुग्छ । भारतको तेलंगानास्थित २२ वर्षिय तमन्ना लोहिथले आफ्नो बुवाको ५०औं बर्थडेको दिन यही कार्य गरे ।...
पेरिस मोटर शोमा प्रस्तुत गरिएको एस्पार्क आउल कारले १.९ सेकेन्डमै १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन सक्छ । यो एक इलेक्ट्रिक कार हो । सो कार सिंगल चार्जमा १५० किलोमिटर सम्म चल्न सक्छ । यसको मूल्य करिब ४२ करोड रुपैयाँ पर्छ । यो हाल सम्मकै सर्बाधिक महं...
चीनमा बन्यो यस्तो फ्लाइङ स्कुटर
चीनको झाओ डेली नामक व्यक्तिले एक अनौठो उड्ने मेसिन बनाएका छन् । उनका अनुसार यो विश्वको पहिलो उड्ने फ्लाइङ स्कुटर हो । झाओको जन्म चीनको एक गाउँमा भएको थियो । उनी सानैदेखि उड्ने मेसिन बनाउने सपना देख्थे । उनको यो सपना ४ दशक नाघ्दा पुरा भएको छ र उनले व...
यस्तो छ मियामी पुलिसको कार
अमेरिकाको मियामी पुलिसको कार हो यो । वास्तवमा यसलाई कार भन्दा पनि थ्री ह्विलर भन्न सकिन्छ । समाजका विभिन्न स्थानमा पुग्नका लागि कार निर्माता कम्पनी पोलारिसले मियामी पुलिसलाई दिएको हो । यो वास्तवमा तीन पांग्रे पोलारिस स्लिङसट हो । अहिले मियामी पुलिस...
फाइटर जेटलाई समेत बाइकले जित्यो रेसिङमा (भिडियो सहित)
गतिको हिसाव गर्दा लडाकु विमानसँग कोही पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर टर्कीमा भएको अनौठो रेसमा विमानले बाइकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा आगामी अक्टोबर महिनामा विमान, अन्तरिक्ष र टेक्नोलोजी फेस्टिभल हुँदैछ । सो फेस्टि...
के मोदीका माहिलो भाई टेम्पो चलाउछन् ? हेर्नुस् रहस्य
सोसल मिडियामा आजकाल एक तस्बिर निकै नै भाइरल बनिरहेको छ । सो तस्बिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको माहिलो भाइको भएको र उनले टेम्पो चलाएर परिवार पालिरहेको बताइएको छ । मोदी कति सम्म इमान्दार छन् भने आफ्नो परिवारलाई पनि आफ्नो पदमार्फत फाइदा लुट्न...
यामाहाले सार्वजनिक ग-यो २०२१ को लागि नयाँ यामाहा एमटी–०९